Baarlamanka Somalia oo maanta xaruntooda Muqdisho ku yeeshay kulan warbixino loogu dhegeystay guddiyo – idalenews.com
Baarlamanka Somalia oo maanta xaruntooda Muqdisho ku yeeshay kulan warbixino loogu dhegeystay guddiyo
Xildhibaanada Baarlamanka Somalia ayaa maanta kulan ku yeeshay xaruntooda golaha shacabka Qaranka ee magaalada Muqdisho, waxaana shir gudoomiyey Maxamed Cismaan Jawaari oo ah gudoomiyaha Baarlamanka Somalia.
Kulanka maanta oo ay soo xaadireen 165 xildhibaan ayaa waxaa ajendahiisa ka mid ahaa warbixino laga dhegeysanayey qaar ka mid ah guddiyada Baarlamanka kuwaasoo ku saabsan baaritaanka ay ku soo sameeyeen waxqabadka heyadaha dowlada ee ay xilsaaran yihiin.
Waxaa warbixino laga dhegeystay qaar ka mid ah shan ka mid ah 16-ka guddi ee baarlamanku leeyahay, waxaana ka mid ah guddiyadaas, dhaqaalaha, Maaliyada, ganacsiga, warfaafinta, gaadiidka cirka iyo dhulka iyo qaar kale oo ka waramay waxyaabaha ay ku soo arkeen dhaliil iyo amaan wasaaradaha ay soo kormeereen.
Gudoomiyaha Baarlamanka Somalia Maxamed Cismaan Jawaari oo fadhigaas soo xiray ayaa waxaa uu sheegay in dhegeysiga guddiyada Baarlamanka ay sii socon doonaan, maalinta beri ahna uu jirayo kulan kale oo lagu sii ambaqaadayo.
Qaraxyadii is miidaamin ee Axaddii ka dhacay Muqdisho + Video